Muuri News Network » Dhageyso: Wararkii Ugu Dambeeyay Maanta Dagaalka Somaliland & Puntland…
Dhageyso: Wararkii Ugu Dambeeyay Maanta Dagaalka Somaliland & Puntland…
Waxaa gabi ahaanba la joojiyay isu socodkii u dhaxeeyay maamulada Somaliland iyo Puntland, gaar ahaan gaadiidkii ka tagi jiray Puntland ee aadi jiray Somaliland iyo kuwii ka imaan jiray Somaliland.
Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar Faraweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay amarkan inuu ka soo baxay maamulka, wuxuuna tilmaamay in la joojiyay dhaq dhaqaaqii u dhaxeeyay Somaliland iyo Puntland, marka laga reebo gaadiidka ay wataan Masuuliyiinta iyo Ciidamada.
Wuxuu sheegay dadka ka soo jeeda degaanada Somaliland ee ku sugan Puntland in si nabad ah ay ku joogi karaan oo amarkan uu saameyneyn, balse cidii rabta in degaanada Somaliland ay ku laabato ay fasax u tahay.
Sidoo kale wuxuu sheegay Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar Faraweyne in ay jiraan xaalado la xiriiro xiisado colaadeed, ayna dib ka soo sheegi doonaan amarka dambe ee soo baxa.
Xiisadda u dhaxeysa Labada maamul ayaa ka dhalatay Safarkii dhawaan Wasiirka Qorsheynta dowladda Dhexe uu ku tagay degaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag, taasi oo sababtay in shalay labada maamul uu dagaal ku dhexmaro degaanka Tukaraq, halkaasi oo uu ka dhashay dagaal sababay khasaare kala duwan.